दक्षिण ललितपुरको राजनीति : २ मिटर पाइप, सय मिटर कुलो - Dainik Nepal
दक्षिण ललितपुरको राजनीति : २ मिटर पाइप, सय मिटर कुलो
विनोद ढकाल २०७६ पुष १५ गते ९:५७
युवाको संख्या न्युन छ । पशुपालनको सम्भाव्यता भव्य छ तर घरेलु आवश्यकता बाहेक देखिँदैन । व्यावसायीक पशुपालन गर्न सक्ने पुस्ता नै छैन । ९६ बर्षका हजुरबा गाईभैंसी बाँध्ने दाम्लो बाटीरहेका छन् तर बाख्रा राख्नुपर्ने टहरोमा दुईटा मोटरसाइकल राखिएको छ ।
अलि तल अर्को दृश्य छ । मनग्य दालको उत्पादन हुन्छ त्यसले बजार पुग्दा आफ्नो मुल्य उठाउन पाउँदैन । ढुवानी महँगो भयो भन्ने गुनासो सुनाउँछन् । त्यसैले पनि ११ सयको टमाटर बेचेकी एउटी महिला भन्छिन्,‘लैजानेले भाडामा नै त्यति खर्च भयो भनेर एक पैसा दिएनन् ।’
धेरै घर छैनन् । जम्मा ५०–६० घरको मिश्रित बस्ती छ । कोही कांग्रेस छन् कोही नेकपा छन् । तर सिचाईका लागि कुलो निर्माण गर्ने गुनासो पुरानो छ । जम्मा ८–१० लाखको खर्च भयो भने एउटा टोल र त्यहाँ रहेका फाँटमा सिँचाई पुग्न सक्छ । गाउँपालिकाले त्यति पनि खर्च गर्न सकेको छैन । यो, गुनासो बागमती गाउँपालिका–७ मा स्थानीयले प्रतिनिधि सभा सदस्य नवराज सिलवाललाई सुनाइरहेका थिए ।
राजधानी काठमाडौंमा युरोपको जीवन बाँचिरहेका अझ भनौं ललितपुरको कुपन्डोलमा जन्मिएको एउटा सम्पन्नले ललितपुरकै बागमती गाउँपालिकाको यो पीडालाई कति बुझ्दो हो ?
त्यस गाउँपालिकाको उदाहरण मात्र हो । दक्षिण ललितपुरको कथा निक्कै दयनीय रहेको छ । यो यात्रा ले–लेदेखि नै सुरु हुन्छ । अन्य ठाउँको तुलनामा थोरै सुगमजस्तो देखिन्छ । तर राजनीतिक चेत र प्रतिशोध भने उही प्रकृतिको छ जसरी सामाजिक सञ्जालमा कांग्रेस कम्युनिस्टका नाममा चेत भएका सहरी प्राणीको घोचपेच देखिन्छ । त्यहाँ भौतिक हुन्छ । गाउँ भेला, चौतारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका बैठक, सामान्य कार्यक्रममा लेखिएको पत्र, छुटेको सम्बोधन, विर्सिएको बखत पनि राजनीतिक कारण बनिदिन्छ ।
एउटा मात्रै सवारी हिँड्न सक्ने सडक छ । जसलाई फराकिलो बनाउने योजना पार्ने काम हुँदैछ । यो सडक पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि खुलेको सुनाउँदै थिए राजेन्द्र न्यौपाने । विद्यार्थी राजनीतिक कालमा माओवादीलगायतको बलियो प्रभाव रहेको स्थानमा त्यसबेला हिँडेरै राजनीतिक जागरणमा न्यौपानेको सहभागीता रहेको किस्सा सुनियो । मान्छे चलाख नभएका पनि होइनन्, ललितपुरको मुकाम मानभवनमा आएर मालपोतमा अढाई लाखमा डाँडै बेचेर हिँडेको किस्सा पनि सुनियो । जग्गा धनी हामीसँगै थिए, डाँडापारी भिर त पुगे तर आफ्नै जग्गा चिनेनन् । चिन्नेहरूले भन्थे– सल्लाघारीको भिर हो ।
०६४ मा बर्षमान पुनले जितेको चुनावी क्षेत्र, ०७० मा नेपाली कांग्रेसका उदय शमशेर राणाले हुत्याए । ०७४ मा आउँदाचाहिँ सिलवालको जिम्मा आइपुगेको रहेछ । कोही सुनाउँदै थियो– बर्षमान पुन हुँदा केही विकास भए त्यसपछि सिलवाल आएपछि मात्र आशा जागेको छ । पर्याप्त काम भएका छन् । अपेक्षा धेरै नै छन् पूरा हुन सक्छन् भन्ने भरोसा पनि छ ।
सीमित कार्यकर्ता र बस्ती रहेका ग्रामिण भेगमा गाउँपालिकामा नेतृत्व गरेका कम्युनिस्ट हुन् या कांग्रेस २ मिटर पाइप र सय मिटर कुलोको समस्यामा गिजोलिएका छन् । यसैलाई मुद्दा बनाएर कार्यकर्ता फकाउने, भोट बैंक बढाउने खेलोफड्को स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा बस्ने, जिम्मेवारीमा रहनेले गरेको पाइन्छ ।
सरसर्ती हेर्दा समस्या ठूला छैनन् । कोही तरकारी सहर छिराउन नपाएको गुनासो गर्छन् कोही विद्यालयमा रहेका स–साना बालबालिकाको भविष्य सिँगार्ने शिक्षकको मनलाग्दी सरुवा रोक्न अपिल गर्छन् । कसैका दलानमा जम्मा २–४ मिटर पाइप गाउँपालिकाले नदिँदा पानी खान समस्या भएको सुनाउँछन् । यस्तै यस्तै विषयमा गाउँमा राजनीति हुन्छ । स्थानीय तहको राजनीति । वडा, गाउँपालिकालगायतको राजनीति । प्रत्येक मानिसको जनजीविकासँग जोडिएको साधारण सवाललाई पूरा गर्नुपर्ने दायित्व आम मानिस उनको क्षेत्रबाट केन्द्रसम्म पुगेको सांसदको रहेको पनि मान्छन् । जबकि, यी समस्या स्थानीय तहको सरकारले यसै पनि पुरा गर्न सक्छ ।
केन्द्रीय सत्तामा एमसीसीलगायतका विषयमा नेताबीच विभाजन हुन्छ । जसका विषयमा गाउँका मानिसलाई केही थाहा हुन्न । जनताको समस्या उक्त सम्झौतामा सहमति होस् या नहोस्सँग सरोकार राख्दैन । सरोकार दैनिक जिविकोपार्जन, कृषि उत्पादनको सहज र सरलीकरणसँग सम्बन्धित छन्
बाटोदेखि अनेक समस्याबारे सम्बोधन गर्न सिलवालले कसर बाँकी राखेका रहेनछन् । तर स्थानीय सरकारले गर्ने काम किन भएको छैन ? सर्वसाधारण भन्छन्– कांग्रेसले जितेका कारण । कांग्रेस बनिदिए पानी पनि पाउने, नबने केही नपाउने । कार्यकर्तामाझ उभिएका सिलवालले यस्तो गुनासो सुनिरहँदा भने,‘म कुरा गर्छु ।’ गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएपछि कुनै पार्टीको मात्र हुँदैन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । सिलवालले आफू यस क्षेत्रकै जनप्रतिनिधि भएका कारणले पार्टी र व्यक्तिको अनुहार हेरेर हिँड्नु गलत हुने उदाहरण पस्किए । सबैभन्दा ठूलो विकास हो, बाटोले, माटोले कांग्रेस कम्युनिस्ट भन्दैन । तिर्खाले भन्दैन, पानीले भन्दैन । समस्याले पनि पार्टी खुट्याउँदै पछ्याउँदैन । अनि, किन यस्तो राजनीतिक विभेदको जन्जाल बनिरहेको छ समाज ? सिलवाल स्वयम्लाई उदेक लागेको रहेछ ।
यो साधारण उदाहरण मात्र हो । केन्द्रीय सत्तामा एमसीसीलगायतका विषयमा नेताबीच विभाजन हुन्छ । जसका विषयमा गाउँका मानिसलाई केही थाहा हुन्न । जनताको समस्या उक्त सम्झौतामा सहमति होस् या नहोस्सँग सरोकार राख्दैन । सरोकार दैनिक जिविकोपार्जन, कृषि उत्पादनको सहज र सरलीकरणसँग सम्बन्धित छन् । जसलाई सदनका कयन बैठकमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिले राख्ने गर्छन्, त्यसको सुनुवाई सरकारले कत्तिको गरेको होला ?
हिउँदमा सवारी साधन देखेको चढेको आम साधारणले बर्खामा गाउँपालिकाको मुकामसम्म देख्न पाउँदैनन् । ‘बाढी र पहिरो गएको बेला यहि बर्षामा वडाध्यक्ष राहत लिएर घरछिर्न पाएनन् । बाटो बन्द थियो’, न्यौपाने सुनाउँछन्,‘माननीय सिलवाल आफैं पनि क्षेत्रमा राहत बोकेर आउनु भएको थियो, छिर्न सकिएन ।’
यस्तो अवस्था ललितपुर जिल्लामै छ । पारिपट्टी कृष्ण दाहालको क्षेत्रको डाँडो पर्दोरहेछ, यसो परिकल्पना गरें त्यहाँ पनि त्यस्तै होला । अझ यो सोचको दायरालाई फराकिलो बनाएर विश्लेषण गरौं केन्द्रनजिक रहेको जिल्लाको यो हविगत हुँदा पहाडी, हिमाली जिल्लाको अवस्थिति, त्यहाँका जनताको जनजीविकाका विषयमा ठूला तर्क र राजनीतिक लाइनका कुरा गर्ने नेताले कसरी बुझेका होलान् ?
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन आयो, चेतना पनि आयो । दरबार गर्लाम्य ढालेर गणतन्त्र स्थापित भयो । यो परिवर्तनले जनताको जनजीविकामा कत्तिको रूपान्तरण भयो होला ? हरेक दिन रोजगारीको खोजीमा बाहिरिने १७ सय युवाको परिवारलाई सोधौं । मानिसका भावनामा परेका ति चोट र गहभरी आँसु राखी रुन्चे हाँसो बिताउनुपर्ने हरेक दिनलाई प्रश्न गरौं न ? के यो अवस्थाको परिवर्तन तिव्र गतिमा हुनुपर्दैन ?
दीव्यमणिकाे घरमा पाैडेल समूहकाे डिनरसहित गाेप्य बैठक
गुण्डा नाइके ‘दुर्गा’ काठमाडाैंमा पक्राउ, रमेश बाहुनलाई झट्का
कांग्रेसभित्र गम्भीर खतरा बढ्यो, पौडेल समूहले बदला लिने
आँसुका धारा झार्दै उखु किसान महतो भन्छन्– अब मर्ने कि के गर्ने ?
किसानले उत्पादित माछा प्रदर्शनका लागि रुपन्देहीमा मत्स्य महोत्सव गर्ने
दुई सैनिकबीच यौनसम्पर्क राख्न नपाइने
नेपाली सेनाका ठूला हाकिमले कुचिकार महिलालाई जबरजस्ती याैनसम्पर्क गरेपछि…
यसरी हुँदैछ ‘भिजिट नेपाल २०२०’ को भव्य उद्घाटन
सोह्रखुट्टेमा ६ वटा गाडीलाई ठक्कर दिदैँ घरमा गएर ठोक्कियो ट्याङकर
७७ डिएसपीको सरुवा (सूचीसहित)
गुरुङ्ग समुदायले यसरी मनाए तमु ल्होसार (फाेटाे फिचर)
अतिक्रमित क्षेत्र राज्यको मातहतमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन
सांसद श्रेष्ठद्धारा १ वर्षको तलब शिक्षकलाई
अरुण काबेली पावर लिमिटेडको नवौँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
घुस लिएको भन्दै अख्तियारका पूर्व सहायक प्रवक्ता रिजाल पक्राउ
रिचार्जरको भ्रमण वर्ष २०२० लक्षित बिग सेल मेला घोषणा